छन् १४, उड्छन् ६ : जहाज किनेर किन ल्याएको, ठाउँ ओगट्न ? – Hamrosandesh.com
छन् १४, उड्छन् ६ : जहाज किनेर किन ल्याएको, ठाउँ ओगट्न ?
विमानस्थलभरि नेपाली ध्वजावाहक जहाज देखेपछि एकपटक प्रधानमन्त्रीले सहयात्री साथीलाई सोधेछन्, ‘नेपाल वायुसेवा निगमसँग निकै धेरै जहाज पो रहेछन्।’
ती साथीले भनेछन्, ‘ठीक भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, जहाज थुप्रै छन्। उड्दैनन् र यहाँ धेरै देखिएका छन्। मैदानभरि छन्। वाइडबडी पनि छन्। तर, जमिनमा छन्। आकाशमा छैनन्।’
आन्तरिकतर्फ नौ जहाज छन्, तीनवटा मात्रै उडानमा छन्। निगमले सबैभन्दा साख बिगारेको क्षेत्र आन्तरिक हो। तिनमा ट्विनअटर तीन, चिनियाँ वाई १२ ई चार र एमए ६० दुइटा छन्। तीमध्ये ट्विनअटर, वाई १२ र एमए ६० का एक/एकवटाले मात्रै नियमित उडान गरिरहेको जानकारी प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले दिए।
साधनस्रोत प्रशस्त भए पनि सधैं घाटामा जान्छ, निगम। जुनसुकै व्यवस्थापन आए पनि कहिल्यै सुध्रिँदैन यो। निगम दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेका थिए, ‘नेपाल वायुसेवा निगममा वायुसेवा निगमबाहेक घाटामा को छ अरू ? यसमा सम्बद्ध थुप्रै छौं नि हामी, चढ्ने हौंला, चढाउने हौंला, उडाउने हौंला, कुदाउने हौंला, व्यवस्थापन गर्ने हौंला। घाटामा कोही छैन। बोक्ने वायुसेवा निगम एक्लै घाटामा छ। किन भो अर्बौं घाटा ? के बिगार्‍यो त्यसले ? के नोक्सान गर्‍यो त्यो जहाजले ? जहाजले गरेको होइन, हामीले गरिरहेका छौं।’
‘अन्नपूर्ण’ २०१८ जुन २८ मा काठमाडौं आइपुगेको थियो। ‘१५ महिनामै इन्जिनमा यति ठूलो खराबी आउनु स्वाभाविक होइन’, निगमकै एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने। उक्त जहाज थन्किएपछि सबै सेक्टरका उडान दुईदेखि चार घन्टासम्म ‘डिले’ भइरहेका छन्। यसले निगमको गरिमामै आघात पुर्‍याइरहेको छ।